ENTSHA! Istudiyo esitofotofo esiyi-40 m2 - I-Airbnb
ENTSHA! Istudiyo esitofotofo esiyi-40 m2
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKatu
Le ndlu ihlaliswa kunye namanye amagumbi amabini epropathi enye kuwo wonke umgangatho ophantsi wesakhiwo samatye senkulungwane ye-18, eyayiyeyentsapho yabanikazi beenqanawa kwaye kutsha nje ibingumzi-mveliso wetyuwa. Ikwesinye sezitrato ezithuleyo kwiziko lembali laseGetaria, eliphela kwizibuko.
Imalunga ne-40 square metres yendawo evulekileyo. Indawo entle inekhitshi elinezixhobo kunye negumbi lokuhlala elinebhedi yesofa evulekileyo kunye nendawo yokutyela, kwaye ilungele izibini okanye iintsapho ezincinci. Inkululeko yokuhamba.
Sinikezela ngekhithi yokuhlambela epheleleyo kunye nezinye izixhobo zasekhitshini nayo yonke into oyifunayo. Sithathele ingqalelo zonke iinkcukacha kwiprojekthi yethu ye-apartamentuak yaseKatu Kale ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho kwaye sinethemba lokuba ngexesha lotyelelo lwakho uya kuhlonipha kwaye uthandane noGetaria njengoko senzile.
E-Getaria, isitalato i-Aldamar kalea ibizwa ngokuba yiKatu kale (isitrato seekati). Ngembeko yabantu bayo kunye nezithethe, le projekthi siyibize ngokuba yiKatu kale apartamentuak.
Ubizo njengedolophu yabalobi kunye noomatiloshe bekulisiko eGetaria. Ukususela kwiinkulungwane ezidluleyo ekulobeni iminenga ukuza kuthi ga namhlanje, uninzi lweearrantzales (abalobi) ezingabamelwane zisanxulunyaniswa nolwandle.
IGetaria yenye yezona dolophu zintle kunxweme lonke lwaseGipuzkoan, enonxweme oluzolileyo (iMalkorbe) ukuze ibe litheku, apho unokubheqa khona, ukudada okanye ukuntywila kunye nolwandle lwasendle (Gaztetape) lokusefa. Ukongeza, le dolophu ine-gastronomy emnandi esekelwe kwiimveliso ezilungileyo kunye nokupheka ekhaya, i-specialty yayo yintlanzi eyosiweyo. Kwelinye icala, unokuyonwabela inkcubeko, undwendwela imyuziyam ye-couturier eyaziwayo kumazwe ngamazwe uCristobal Balenciaga. IGetaria yidolophu encinci ukonwabela.
Umbuki zindwendwe ngu- Katu
Somos Imanol y María, una pareja joven que nos hemos enamorado de Getaria y en Getaria. Es con esta ilusión, que iniciamos este proyecto, Katu Kale Apartamentuak. Nos hemos esmera…
SinguImanol noMaría, isibini esiselula esiye sathandana noGetaria naseGetaria. Kungenxa yeli themba ukuba saqala le projekthi kwaye siya kukuvuyela ukunceda kunye nokuququzelela ukuhlala.
Ngena ngo-14:00 ukuya ku-17:00.
Jonga ngo 09:00-10:00.
Sinokunikezela ukugcina imithwalo ngexesha lokufika kunye neentsuku zokuhamba. Ixesha lokufika malibhengezwe kwangethuba ukuze kwenziwe amalungiselelo okungeniswa kweendwendwe kunye nokunikezela ngezitshixo.
SinguImanol noMaría, isibini esiselula esiye sathandana noGetaria naseGetaria. Kungenxa yeli themba ukuba saqala le projekthi kwaye siya kukuvuyela ukunceda kunye nokuququzelela uk…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Getaria